हेर्नुस अचम्म ! यो बाटो पानी जहाज र हवाई जहाज हिँडेका कोही पनि जिउँदो फर्किएको छैन् – Nepali Taja Khabar
हेर्नुस अचम्म ! यो बाटो पानी जहाज र हवाई जहाज हिँडेका कोही पनि जिउँदो फर्किएको छैन्
एजेन्सी । संसारमा यस्तो धेरै ठाउँ छन् जो रहस्यमय ठाउँ बनिरहेका छन् । यस्तै एउटा ठाउँ बरमुडा ट्रयाङगल छ,जसको नाम डेविल्स ट्रयाङ्गलको नामले बदनाम गरिएको छ । जहाँ कोही पनि जान चाहँदैन् ।
एट्लान्टीक महासागरमा रहेको बरमुडा ट्र्याङ्गल आफ्नो रहस्यहरुको कारण मशहुर छ । आजसम्म धेरै हवाई जहाँजहरु नांव बरमुडा ट्रयाङ्गलबाट बिलाउछन् वा हराउछन् ।यदि दोस्रो पटक मिले पनि क्रु मेम्बर्स पनि थाहा हुँदैन् ।
आज तपाई थाहा पाउदै हुन्हुन्छ बरमुडा ट्रयाङ्गलसँग जोडिएको रहस्य जसको जवाफ कसैलाई पनि थाहा छैन । सयौं जनाको ज्यान समेत गइसकेको छः ९१० खतरनाक जोनमा समावेश बरमुडा ट्रयाङ्गलमा वितेको १०० वर्षमा हजार जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
एउटा अनसन्धानमा यो तथ्य पत्ता लागेको छ कि यहाँ प्रत्येक वर्ष ४ हवाई जहाज र २० समुद्री जहाज रहस्यमय तरिकाले हराउँछन् । ९२० जहिले पनि यहाँबाट हराउने जहाजको शवसमेत फेला पर्दैन् । यसको लागि गल्फ स्ट्रिम जिम्मेवारी हुन सक्छ । यो गल्फ म्याक्सिको खाडीबाट निकलेर फ्लोरिडाको जलडमरुबाट उत्तरी एट्लान्टीकसम्म फैलिएको छ ।
जो आफ्नो साथ सारा मलबा उठाएर लैजान सक्छ । यो गलफ स्ट्रिम असलमा समुद्रको भित्र नदी जस्तो छ । यो धेरै गतिलो पाराले बग्छ । जसले गर्दा दुर्घटना हुन्छ होला । ९३० अमेरिका भौगोलिक सर्वेक्षण अनुसार बरमुडा ट्रयाङ्गलको तल मिथेन हाइट्रेट नामको रसायनको विशाल भण्डार छ समुद्रमा बन्ने यो हाइड्राइट जब अचानक फाट्छ भने आफ्नो आसपासको सबै चीजलाई कब्जामा लिन्छ ।
यस्तोमा केहि वैज्ञानिकहरुले भनेका छन् जहिले पनि यो हाइड्रा फाट्छ भने यसबाट फुट्ने बुलबुले पानीबो डीसिंटकम गर्छ र जसले गर्दा जहाज डुब्न जान्छ । ९४० बरमुडा ट्रयाङ्गललाई एलियंसको घर मानिन्छ र भनिन्छ यो ठाउँमा रहने एलियंसले आफ्नो प्लानेटसँग पनि जोडिएर रहन्छ ।
यसकारण यहाँ यति दुर्घटना हुन्छ । केही मानिसले यो पनि भन्छन् कियो क्षेत्रमाटाइम जोनान अनुसन्धानको लागि अमेरिकी एक धेरै ठूलो गोप्य प्रयोगशाला छ एलियन सँग जोडिएको अनुसन्धान गरिन्छ । ९५० यो भित्र डाइरेक्सन बताउने कम्पासले काम गर्दैन् । त्यसको कारणले यहाँ दिशा पत्ता लाग्दैन् र यहाँ हराउछन् । कसैले यो पनि भन्छन् कि यो भित्र रहने एलियसको कारणले कम्पासले काम गर्दैन् ।
९६० यहाँबाट बाँच्न सफल भएका केहिले यो भित्र बादलको सुराग भएकोले भित्र व्लेनले काम गर्दैन् र यो भित्र फसेपछि बाहिरको दुनियाँ सँगको सम्पर्क समाप्त हुन जान्छ भनेका छन् । ९७० केहिले भन्छन् यो ठाउँ जस्तो ठाउँ अन्त कही पनि छैन । हुनसक्छ यो एउटा सुनेर कुनेको कथामात्रै हो । यस्तो पनि भनिन्छ समुन्द्री लुटेराले यो प्रकारको कथा फैलाएको हुनुपर्छ ताकि उनीहरु आरामसँग जहाजहरु लुटन सकोस् र अरु कसैको आफूमा शंका नहोस भनेर ।
नराम्रो अनुहार लिएर ज’न्मेको भन्दै आफ्नै आमाबाबुले अर्कैलाई बे’चिदिए , तर ति ब्याक्ति नै बने चर्चित मोडल